इपान चुनाव रोकिएपछि आरोप–प्रत्यारोप, प्रवर्द्धकहरूले विवेक गुमाएकै हुन् ? - UrjaKhabar इपान चुनाव रोकिएपछि आरोप–प्रत्यारोप, प्रवर्द्धकहरूले विवेक गुमाएकै हुन् ? - UrjaKhabar
इपान चुनाव रोकिएपछि आरोप–प्रत्यारोप, प्रवर्द्धकहरूले विवेक गुमाएकै हुन् ?
काठमाडौं । आज (असार १५ गते, सोमबार) स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को निर्वाचन हुँदै थियो । तर, आइतबार साँझ अचानक ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परिपत्र गर्यो, निर्वाचन नगर्न/नगराउन भन्दै ।
इपानको नाममा लेखिएको पत्रमा भनिएको छ– नेपाल सरकारद्वारा कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) कारणबाट लकडाउन गरेको र नेपाल सरकारद्वारा २५ जनाभन्दा बढी भेला जम्मा गर्न बन्देज लगाएको तथा अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिरी जिल्लाबाट उपत्यका प्रवेश रोक लगाइएको अवस्थामा त्यस संस्थाबाट निर्वाचन हुन लागेकोले उक्त निर्वाचन स्थगन गरी पाउँ भनी रोशन बस्नेतले यस कार्यालयमा उजुरी पेश गरेकोले माथि उल्लेखित कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) सम्बन्धी प्रोटोकल पूरा गरी तथा नेपाल सरकारद्वारा तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल पूरा गरेर मात्र निर्वाचन गर्नुहुनका साथै हाललाई उक्त निर्वाचन स्थगित गर्नु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।
निर्वाचन सम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको र उमेदवारहरू भोट माग्न व्यस्त रहेको समयमा यसरी परिपत्र आउनु आश्चर्य नै थियो । निर्वाचनका लागि दुई खेमा (कृष्ण आचार्य र सूर्यप्रसाद अधिकारी) बीच प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको थियो ।
अन्तिम समयसम्म सहमतिबाट नेतृत्व तथा पदाधिकारी चयन सम्भव नभएपछि दुवै पक्ष निर्वाचनमै होमिएका थिए । इपानले एक पटकमा २० जनाभन्दा बढी नहुने गरी दूरी कायम गरेर लाइनबाट भोट खसाल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
इपानको व्यवस्था अनुसार सरकारले तोकेको प्रोटोकल वा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पूरा हुन्थ्यो । २०–२० जना सामाजिक दूरीमा रहेर भोट दिँदा सरकारको नियम उल्लंघन भएको मानिदैनथ्यो । तर, उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासनले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको बुझिन्छ ।
जिल्ला प्रशासनको पत्रलाई नै आधार मान्दा तत्काल रोकिएको निर्वाचन कुनै पनि समय गर्न सकिन्छ । बन्देज लगाइएको छैन । उसले स्वास्थ्य सम्बन्धी संवेदनशीलता र दूरी कायम गरी निर्वाचन गर्नुहुन भन्ने निर्देश गरेको छ ।
यसो त जिल्ला प्रशासनले निर्देशन दिनुअघि नै इपानले मापदण्ड पुर्याएरै निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको थियो । यति हुँदा–हुँदै किन उजुरी पर्यो ? कसलाई केमा चित्त बुझेन ? वा निर्वाचनमा जान को तयार थिएन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यद्यपि, यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुभन्दा विधि पुर्याएर निर्वाचन गर्नतिर निजी प्रवद्र्धक लाग्नुपर्ने हो ।
इपानले पनि सक्दो चाँडो निर्वाचन गराएर नयाँ कार्यसमिति भित्र्याउनुपर्छ । यसमा अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं तथा उनका पदाधिकारीको दायित्व बढी देखिन्छ । गुरागाईंले चाँडो निर्वाचन गरेर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिदिँदा उनकै लागि पनि फाइदाजनक हुने देखिन्छ । यसरी, नयाँ निर्वाचनतिर एकोहोरिनुपर्ने बेला निजी प्रवर्द्धकहरू जिल्ला प्रशासनमा परेको उजुरी उधिन्दै एकअर्काबीच आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेको देखिन्छ ।
निर्वाचनको गर्मी बढिरहँदा पुराना र नयाँबीच मतदातामा विवाद देखियो । पुराना प्रोक्सीका आधारमा मतदान हुने र यसलाई बैधानिकता दिनुपर्ने अडानमा बसे । तर, नयाँ समूह प्रोक्सी मान्य नहुने, मतदाता वा सदस्य नै भोट हाल्न आउनुपर्ने जस्ता अडानमा उभिए । यी दुवैको बाझाबाझले पनि उजुरी दर्ता गराउनेलाई बल पुगेको हुनुपर्छ ।
कानुनी आधार अनुसार इपान गैरनाफामुखी संस्था हो । यस्ता संस्थामा प्रोक्सीका आधारमा भोट हाल्ने अधिकार हुँदैन । पुरानाले प्रोक्सी बटुलेर मतदानमा होमिनु कमजोरी देखियो । उता नयाँहरू विरोध गर्दै तीन हात उफ्रिनु पनि गलत नै । यो विषय मिलाउन नसक्नु विद्यमान अध्यक्ष र त्यो पदमा जान उफ्रिएका विद्वानहरूको महाभुल देखियो ।
थोरैमात्र सदस्य रहेको ठाउँमा जितेर उत्पात मच्चिने केही थिएन । मात्र, एकअर्काबीच रिसिवी, इगो, स्वार्थ वा आक्रोस पोखिएको देखियो । को भन्दा को कम भन्ने तँछाडमछाड देखियो । जाबो १ सय ७४ सदस्य मिल्न नसक्ने वा मिलाएर लैजान नसक्नेले नेतृत्व गर्छु भनेर किन डिङ हाँक्नु ?
आज झन्डै हजार विद्युत् उत्पादक कम्पनी पुगिसके । यी मध्ये १ सय ७४ मात्र इपानको छाताभित्र छन् । बहुसंख्यक बाहिरै रहेको समयमा सहमतिबाट पदाधिकारी चयन गरेको भए हुन्थ्यो । जम्मा १ सय ७४ सदस्यभित्र लुछाचुडी गर्नुपर्ने केही थिएन । न त्यहाँ कसैले पाउँथ्यो न गुमाउँथ्यो ।
संस्थापन वा पुराना र नयाँ अनुहारबीच सहमतिको प्रयासमा पुराना बढी लचिलो हुनु जरुरी थियो । नयाँ पनि आफ्नै ढिपीमा बस्नु उचित हुदैनथ्यो । यहाँनिर, नयाँ अनुहारहरू पुरानाले चित्त बुझाए जुनसुकै बेला सहमति गर्न सकिने बताइरहेका थिए । फेरि पनि दुवै पक्षबीच समन्वय गरेर सहमतिको भावना विकास गर्न नसक्नुमा पुराना नै बढी जिम्मेवार देखिए ।
अनि, त्यति थोरै सदस्यबीच पनि सहमति नहुनु वा निर्वाचन गराउन नसक्ने निकायले हामी निजी क्षेत्रको छाता संगठन भनेर किन डम्फू बजाउनु ? सानो घेराभित्रै मिल्न नसक्नेहरू हजारौंको संख्याबीच के गर्लान् ? यिनले ऊर्जा विकासको सिंगो निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्लान् ? कि कुटाकुट मारामार गरेर आफू–आफूमै सकिएलान् ?
यस्तो गाईजात्रा देखाउनेहरू कसरी सक्षम, दक्ष र इमान्दार निजी क्षेत्र हुन सक्छन् ? आफू–आफू लडिरहनेहरूले बिजुली उत्पादन गरेर राज्यलाई यति योगदान गर्यौं । उति गर्यौ भनेर उद्देलित हुनुको के तुक ? यस्ता प्रवद्र्धक वा निजी क्षेत्रलाई नहेपेर सरकारले कसलाई हेपोस् ?
तुलोमा जोख्दा मासु घटीबढी होला तर इपानलाई छिन्नभिन्नको अवस्थामा पुर्याउनु, अझ उधो गतितिर डोर्याउनु र सिंगो निजी क्षेत्रलाई बदनाम गराउनुमा म ठूलो भन्ने टाउकेहरूकै योगदान देखिन्छ । मैले यति विद्युत् उत्पादन गरेँ वा यति मेगावाट मेरो योगदान छ भनेर कुर्लिने वा निजी क्षेत्रको ठेक्का लिनेले सबैलाई मिलाएर लैजाने हैसियत राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? कि विवेक गुमाएका हुन् ?
सुधार्नुपर्ने, सरकारसँग समन्वयमा भिड्नुपर्ने, सुविधाका लागि टेबल ठटाउनुपर्ने बेला आफू–आफू क्रोधित भएर उम्लिनेहरूलाई सरकारले अझ कठोर रूपमा नियमन गरोस् । घोषित सुविधा दिने होइन ढोकाबाट गलहत्याएर बाहिर निकालोस् । समन्वय र सहजीकरणको दूरी बढाओस् । यदि, सरकारले यसो गर्नु अपराध हो भने किन लड्ने आफू–आफू ? किन एकअर्काबीच आरोप–प्रत्यारोप ?
निर्वाचन रोक्ने निर्देश अनुसार आएको पत्र अध्यक्ष गुरागाईंले भाइबर ग्रुपमा राखे । अनि सुरु भयो, तँ तँ र म म । उनैले ग्रुपमा लेखे– फेदी खोलाका निर्देशक तथा इपान सदस्य श्री रोशन बस्नेतले कोरोना महामारीको समयलाई ध्यान राखी सम्पूर्ण इपानका सदस्यहरूको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै यो पत्रले सरकारले तोकेको सम्पूर्ण प्रोटोकल पूरा गरी निर्वाचन गर्न नरोकेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु । निर्वाचन अन्तिम समयमा रोकिएर पुगेको असुविधाका लागि सम्पूर्ण मतदाताप्रति क्षमता चाहन्छु ।
सोही कुरा अर्का प्रवर्द्धक मोहनकुमार डाँगीले कपी पेस्ट गरेर दोहोर्याए ।
प्रवर्द्धक बटु लामिछानेले ऊर्जा खबरको भाइबर ग्रुपमा लेखे– स्वतन्त्र जलविद्युत् उत्पादक संस्था जुन एउटा विशुद्ध पवित्र जलविद्युत् व्यवसायीको हितमा कार्य गर्ने संस्था हो । यसमा हुन लागेको निर्वाचनमा मत दिन निर्वाचन कार्यसमितिले निर्णय गरी मतदाता स्वयं उपस्थित हुन नसक्नेले प्रोक्सी मार्फत मत दिन तथा उपस्थितको लागि प्रजातान्त्रिक अभ्यासको निर्णय भई मतदानको प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको थियो । मत हाल्ने एक दिन अगाडि हार हुने निश्चित देखी त्यस निर्णय विरुद्ध लफडाबाजी निकाली निर्वाचन रोक्न सफल हुनुभएकोहरूलाई हार्दिक बधाई छ । हार र जित प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा हुने प्रक्रिया बुझ्न नसक्नु अहिलेको अवस्थामा विडम्बना हो ।
लामिछानेकै टिप्पणीमा भरत खत्रीले जवाफ फर्काए– प्रोक्सीको माध्यमबाट सुनियोजित तरिकाले इपान कब्जा गरी राख्ने र नयाँ व्यक्तिलाई इपानको बोर्डमा जान सिन्डिकेट लगाउने पदासिनहरूको योजना असफल हुन्छ । प्रोक्सी नेपालको प्रचलित ऐन कानुन (संस्था दर्ता ऐन, २०३४) ले निषेध गरेको छ । कुनै पनि ठाउँमा बसेर छलफल गर्न तयार छौं । करोडौं अरबको लगानी र जोखिम लिनेले भोट हाल्न अरूलाई पठाउने यो हुन सक्दैन । यदि, कसैले प्रतिनिधि पठाउनु परे कम्पनीको लेटर हेडमा अख्तियार लिएर आउनुपर्यो । अरूलाई दोष नलगाऊँ आफू निर्दोषी बनौं । यो बुझौं इपान संस्था हो निजी घर होइन ।
यी केही नमुना मात्र हुन् । फेसबुक, भाइबर र ऊर्जा खबरको भित्री म्याजेस बक्स प्रयोग गरेर एकअर्काबीच हिलो छ्याप्न प्रवद्र्धकहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यी गतिविधिले उनीहरूलाई कहाँ पुर्याउँछ । उनीहरूको विवेक र विद्धताको कसरी मापन हुन्छ । आफू भने ६–७ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्रको अगुवाई गर्ने भन्ने तर सोचको आयतन गुहेकीराको जस्तो बनाउने ?
निजी क्षेत्र यसरी आफू–आफू कुस्ती खेल्ने हो भने उसलाई अरूले सिध्याउन पर्दैन । सरकारले नै सिध्याइदिन्छ । आफू संगठिन हुन नजान्ने । एकतामा अनेक भाँजो हाल्ने अनि सरकारले यसो गर्यो र उसो गर्यो भन्न नैतिकताले दिन्छ ? अबका दिनमा सिंगो निजी क्षेत्र एक ढिक्का नहुने हो भने सरकारले चेप्दै जान्छ ।
लगानी असुरक्षित हुन्छ । सर्वसाधारणदेखि बैंकले उसैलाई गाली गर्नेछन् । यसका बहुआयामिक असरले प्रवर्द्धकको घाँटी थिच्नेछ । प्रवर्द्धकले आत्महत्या गर्ने वा पलायन हुने दिन आउँछ । त्यो दिन आउन नदिन एकतामा जानुपर्यो । नत्र कमण्डलु लिएर काशी बास गए हुन्छ ।